BBC Somali - Ganacsi - Ganacsatada Soomaalida ee Koonfurta Sudan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 6 Luulyo, 2011, 18:47 GMT 21:47 SGA
Ganacsatada Soomaalida ee Koonfurta Sudan
Ganacsatada Soomaalida ee shidaalka ee Koonfurta Sudan
Koonfurta Sudan ayaa noqonaysa wadan cusub Sabtida soo socota Gobolka Abyei ee shidaalka laga soo saaro ayaa wuxuu ku yaalaa koonfurta Sudan, laakiin dhuumaha laga dhoofiyo saliida shidaalka iyo warshadaha lagu sifeeyo shidaalka ayaa waxay ku yaaliin waqooyiga Sudan.
Koonfurta iyo Waqooyiga Sudan ayaa waxay qaybsadaan lacagta ka soo gasha shidaalka Sudan.
Heshiiska ay Koonfurta iyo Waqooyiga Sudan ku qayb sanaayaan lacagta ka soo gasha saliida shidaalka ayaa lagu gaaray heshiiskii nabada ee 2005tii, heshiiska ayaa wuxuu dhici doonaa waqti dhow waxaana u socda wadahadal Koonfurta iyo Waqooyiga Sudan sidii loo gaari lahaa heshiis cusub iyo sidii loo qaybsan lahaa daynta wadanka lagu leeyahay.
Ganacsatada Soomaalida ee joogta Koonfurta Sudan waxay ka ganacsataa Shidaalka, Wariyaha BBCda Bashkas jug soo dhacay oo jooga magaalo madaxda koonfurta Sudan ee Juba, ayaa la kulmay qaar kamid ah ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada Juba ee koonfurta Sudan.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa marar badan lagu eedeeyay in malaayin doollar oo soo galay aan la garanayn meesha ay ku dambeeyeen. Eedeynta waxaa ugu dambeeyay mid uu sameeyay mas'uul ka tirsan xafiiska Raiisal Wasaaraha oo shir saxaafadeed oo uu ku qabtay Nairobi ku tilmaamay in lacago badan oo dowladda soo gashay aan xataa buugga dowladda lagu qorin, meel ay ku dambeysayna aan la aqoon.
Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya, Xuseen Cabdi Xalane, ayaa Yusuf-Garaad weydiiyay lacagaha maqani meesha ay jiraan.
Maxay yihiin kuwan?
Daawo: Shirkadaha Maraykanka iyo Afrika
Albayrak oo maamulaysa dekadda Muqdisho
Waraysi Wasiirka Maaliyada ee Djibouti Wararka hore
Kerry:50 waddan ayaa taageersan weerarka
Nigeria oo baareysa gabdho la sii daayay
Duqeynta USA ee Daacish oo gaartay Suuriya
MaqalWareysi: Wasiirka Warfaafinta SoomaaliyaMaqal05:26Wareysi: Raxma RuuxiMaqal07:20Faadumo Qaasim oo geeriyootayMaqal08:33
Ka Qayb Gal
BBC iD BBC iD Settings Sign out Shuruudda wax raadinta: BBC navigation News Sport Weather iPlayer TV Radio More CBBC CBeebies Comedy Food History Learning Music Science Nature Local Northern Ireland Scotland Wales Full A-Z of BBC sites Isku xirayaasha BBC Mobile ahaan Shuruudaha adeegsiga Ku saabsan BBC Siyaasadda xog dhowridda Caawinta adeegga La xiriir BBC BBC © 2014 BBC mas'uul kama aha waxa ku qoran boggaga aan BBC ahayn. Boggan waxaa sida ugu wanaagsan loogu daalacan karaa qaab waqtiga la socda iyadoo la adeegsanayo waraaqaha qaabaysan ee (CSS). Adigoo awoodi doona in aadqaabka aad hadda isticmaalayso ku aragto bogga waxa ku qoran, hadana si buuxda ma kuugu muuqan doono. fadlan ka fakar in aad badasho barnaamijkaaga wax baaridda (browser) ama in aad kordhiso awoodda waraaqaha qaabaynta ee (CSS) hadii aad sidaa yeeli karto.